संसदीय दलको नेतालाई आधिकारिकता राष्ट्रपतिले दिने कि संसद सचिवालयले ? - Kantipath.com
संसदीय दलको नेतालाई आधिकारिकता राष्ट्रपतिले दिने कि संसद सचिवालयले ?
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि दिइएको २१ घण्टाको समय शुक्रबार बेलुका ५ बजे सकिएको थियो। त्यतिञ्जेलसम्म शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि १५३ जना सांसद् संख्या हुने गरी दलीय समर्थन सहित दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नमिल्ने भन्दै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा शुक्रबार राति ११:३८ सार्वजनिक विज्ञप्तिमा जसपाका सांसद् राजेन्द्र महतोलाई दुई ठाउँमा संसदीय दलको नेता भनिएको छ। जसपाभित्रै यो विषय विवादमा छ। सो पार्टीको संसदीय दलको पूर्ण बैठक बसेको छैन। कार्यकारिणी समितिबाट पारित हुनुपर्ने संसदीय दलको विधान पनि तयार छैन। दुई समूहमा विभाजित भएको जसपाको संसदीय दलको एक पक्ष अर्थात् महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षको बैठक बसेर महतोलाई संसदीय दलको नेता भनिएको हो। र, सोही अनुसार संसदीय दलको भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको हो। त्यसबारे संसद् सचिवालयले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
राष्ट्रपतिले महतोलाई आधिकारिता दिएकी छिन्। अब यस्तो विवादको बेला एउटा समूहले ‘उहाँ नै हो संसदीय दलको नेता’ भनेर आफूमध्येको कसैलाई देखायो र राष्ट्रपतिलाई पत्रचार गर्‍यो वा वक्तव्य सार्वजनिक गर्‍यो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले आधिकारिता दिने कि नदिने? एक जना मात्रै किन, एकभन्दा बढीले आफू नै संसदीय दलको नेता हुँ भन्यो भने राष्ट्रपतिले सबैलाई सोही अनुसार सम्बोधन गर्ने ?
Previous Previous post: पुनजीर्वित सदनको ८७ दिनमै घाँटी निमोठियो : दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा
Next Next post: एमाले सांसद कै कारण संसद विघटन भयो : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली